ट्याग: पृष्ठ मोडो | Martech Zone
ट्याग: पृष्ठ मोडो
वेब र प्रिन्टको लागि ग्राफिक्स र रूपरेखाका डिजाइनरहरू द्वारा प्रयोग गरिएको आम शव्दकोश।
कसरी साना व्यवसायहरूले सामाजिक मिडिया प्रयोग गर्दछ
बुधवार, मई 2, 2012 आइतवार, सेप्टेम्बर 8, 2013 Douglas Karr
यो याद गर्नु सधैं चाखलाग्दो हुन्छ कि अन्य बजारहरू आफ्नो फाइदाको लागि सोशल मीडियाको लाभ उठाउँछन्। पृष्ठ मोडोले कसरी एक इन्फोग्राफिक विकसित गरेको छ मार्केटरहरू कसरी सामाजिक मिडिया सफलतापूर्वक प्रयोग गर्दैछन्। इन्फोग्राफिक भर्खरको सर्वेक्षणमा आधारित छ र सोशल मिडिया प्रयोग गर्ने सबैभन्दा सामान्य फाइदाहरू प्रदर्शन गर्दछ। सहित: साना व्यवसायका लागि सामाजिक मिडिया मार्केटिंग कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ? कुन मिल्दोजुल्दो साना व्यवसायहरूले सामाजिक मिडिया मार्फत प्राप्त गर्दछ कुन कुन कारकहरूले अधिक परिणामहरू उत्पादन गर्दछ!
यो प्रायोजित पोष्ट हो। खोज इञ्जिन श्रेणीकरणको मान यत्तिकै उच्च भएको कारण, यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन कि अनुसन्धान उपकरणहरू वेबमा सबै ठाउँमा आइरहेका छन्। म मेरो ब्लगमा वर्डट्रेकर प्रयोग गर्छु, किनकी तपाईको प्रत्येक पोष्टहरूका लागि सबै भन्दा राम्रो ट्यागहरू फेला पार्न यो एक सजीलो प्रयोग प्लगइन हो। मलाई थाहा छ कि SEOmoz सँग प्रिमियम सामग्रीको शस्त्रागार भित्र धेरै केवर्ड र कुञ्जी वाक्यांश उपकरणहरू छन्, म केवल खर्चको औचित्य प्रमाणित गर्न सक्दिन।